ब्राजिलियन स्टार नेइमार संसारकै महंगा खेलाडी, पछि परे मेस्सी — sancharkendra.com
ब्राजिलियन स्टार नेइमार संसारकै महंगा खेलाडी, पछि परे मेस्सी
काठमाडौं । ब्राजिलियन स्टार नेइमार संसारकै महंगा खेलाडी भएका छन् । फुटबल बेन्चमार्क डटकमले अडिटर्स कम्पनी केपीएमजीसँगको सहकार्यमा हालै गरेको अध्ययनले नेमारलाई सर्वाधिक मूल्यबान खेलाडीको पहिलो सूचीमा राखेको हो । नेइमारको मूल्य २०६.५ मिलियन पाउण्ड रहेको छ ।
यसैगरी फ्रान्सका युवा स्टार केलियन एमबाप्पे दोस्रो स्थानमा छन् । एमबाप्पेको मूल्य १९३. मिलियन पाउण्ड रहेको छ । तेस्रो स्थानमा अर्जेन्टिनी सुपरस्टार लियोनल मेस्सी रहेका छन् । मेस्सीको मूल्य १८३.२ मिलियन पाउण्ड रहेको छ । पोर्चुगिज सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो भने शीर्ष १० मा अटाएका छैनन् । १२ औं स्थानमा रहेका रोनाल्डोको मूल्य ९६.४ मिलियन पाउण्ड मात्र रहेको छ ।
उता निस लिग फुटबलमा रियल मड्रिडले शीर्ष स्थानको बार्सिलोनासँग अंक दूरी घटाउने अवसर गुमाएको छ । गएराति भएको खेलमा भियारियालसँग २–२ गोलको बराबरी खेलेपछि रियालले बार्सिलोनासँगको दूरी घटाउने अवसर गुमाएको हो । खेलमा रियल मड्रिडलाई निराश बनाउन आर्सनलका पूर्वखेलाडी सान्टी काजोर्लाले दुई गोल गरे ।
पाहुना टोली रियलका लागि भने करिम बेन्जमा र राफेल भारानेले एक–एक गोल गरे । गएरातिको खेलपछि १७ खेलबाट ३० अंक जोडेको रियल मड्रिड अंक तालिकाको चौथो स्थानमा यथावत छ । समान खेलबाट ३७ अंक जोडेको बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा छ । दोस्रो स्थानको एथ्लेटिको मड्रिडको ३४ अंक छ भने ३२ अंकसहित सेभिया तेस्रो स्थानमा छ
२०७५ पुष २१ गते प्रकाशित
संसदबाट विप्लवलाई ओलीको यस्तो धम्की- ‘हतियार लिएर लुरुलुरु बुझाउन आउ, नत्र जान्याछु’
एसईई परीक्षा आजदेखि सुरु, ४ लाख ७५ हजार विद्यार्थी सहभागी
एसईई आजदेखि, गाइड-गेसपेपरकै भर
सुदर्शनलाई गिरफ्तार गरेर ओली-प्रचण्ड पार्टीका प्रवक्ताले विप्लवलाई वार्तामा बोलाए, अब के हुन्छ ?
प्रश्नपत्र समेत आउट गरेको भन्दै डोटीका जिशिअलाई विद्यार्थीले दले कालामोसो
डोटी । डोटीका शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईका प्रमुख अनन्त कुमार पौड्याललाई कालाेमाेसाे दलिएको छ...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाका सबै गतिविधि नियन्त्रण गरेरै छाड्ने चुनौती दिएका छन् ।...
आईपिएलमा सन्दीप पहिलो म्याचमा नै आज प्लेइङ एघारमा पर्ने सम्भावना
काठमाडौँ । नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले आज इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा पहिलो खेलमै...
सुदर्शनसहित ९ जनालाई ८ दिनको म्याद थपियो, यस्तो लगायो मुद्दा
काठमाडौं । शनिबार बिहानै गिरफ्तार परेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा मध्य केन्द्रीय कमाण्ड...
निर्मला हत्या प्रकरण : जिल्ला अदालतले एसपी डिल्लीराजलाई दियो यस्तो आदेश
निकाठमाडौं । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गरेको र यातना दिएको अभियोग...
एनसेलपछि अरु को-को छन् नेकपाको कारवाही गर्नुपर्ने लिस्टमा ?
आर्थिक अनियमितताको नमुना, अध्यक्ष र प्रअ मिलेर श्रीकृष्ण माविको ३२ लाख झ्वाम्